अनसन तोड्दै डा. केसीले भने- 'सीमाका नागरिकको पीडा राज्यले बुझेन'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ २१, २०७७ मनोज बडू
दार्चुला — चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले बुधबार अनसन तोडेका छन् । मंगलबारदेखि दार्चुला गल्फैस्थित जगन्नाथ स्वामीको मन्दिरमा उनी अनसन बसेका थिए ।
भारतद्वारा मिचिएको भूमि फिर्ता र सीमान्तकृत नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अनसनमा बसेका उनलाई स्थानीय युवाले फलफूल र दूध पिलाएर अनसन तोडाए ।
स्थानीय युवा पदम ठगुन्नाले सामूहिक र राष्ट्रियता बचाउनका लागि चालेको अभियानमा आफूहरुको पनि साथ रहेको बताए ।
केसी जेठ १ गते दार्चुला आएका थिए । राष्ट्रियता सिंहदरबारबाट बुझ्ने नसकिने भन्दै उनले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिता गर्न सरकारले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । 'भारतले पश्चिम सीमामा भूमि मिचेर सडक बनाएको छ ।
हाम्रो सरकार रमिते भएर बसेको छ,' उनले भने, 'मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि तत्काल प्रक्रियामा जानुपर्छ । यसका लागि नागरिकहरुले दबाब दिनुपर्छ ।' राज्यले कहिल्यै पनि सीमा क्षेत्रका नागरिकका पीडा नबुझेको भन्दै उनले सीमाका नागरिकलाई अधिकार र सुविधाबाट वञ्चित गराइएको आरोप लगाए ।
उनले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विगतमा सरकारले गरेको केही सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले वरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्त गर्न र परासर कोइराला प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ १९:४५
कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट जेठ महिनामा मात्रै भित्रिनेको संख्या ५० हजार नाघेको छ ।
जेष्ठ २१, २०७७ मोहन बुढाऐर
धनगढी — कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट जेठ महिनामा मात्रै भित्रिनेको संख्या ५० हजार नाघेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जेठ ७ गतेदेखि भित्रिनेको संख्या ५० हजार नाघेको बताए ।
‘दैनिक ४/५ हजारको संख्यामा भित्रिरहेका थिए,' उनले भने, 'मंगलबार र बुधबार आउनेको संख्यामा भने कमी आएको छ ।’ उनका अनुसार मंगलबार २ हजार ६ सय र बुधबार साढे १८ सय भित्रिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट आउनेको संख्या बढ्दै गएपछि खाली स्कुल र भवनहरु क्वारेन्टाइनमा परिणत हुँदै गएका छन् । बुधबारसम्म ५४ हजारभन्दा बढीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । ‘क्वारेन्टाइन व्यवस्थित पार्न गाह्रो हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ,’ उनले भने, ‘सूचना अधिकारी जोशीले भने, 'हरेक दिन क्वारेन्टाइन थपिँदै गएका छन् । अब होम क्वारेन्टाइनमा पठाउनुपर्ने बेला आएको छ ।’
कोभिड-१९ को लक्षण देखिएका बिरामीलाई आइसोलेसन र परीक्षणको पनि समस्या छ । 'अस्पतालमा पनि आइसोलेसन वार्ड अभाव छ,' उनले भने, 'अब जटिल बिरामीलाई मात्रै भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ ।'
प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ १९:२३